Musiibada Tareenka ee Ankara Waligeed Ma Dhac Karto | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraMusiibada Musiibada Laguma Maqnaan Karin Ankara
15 / 12 / 2018 06 Ankara, Gobolka Central Anatolia, tareenka, GUUD, Tareenka dhakhso ah, Headline, TURKEY
"Goobta loo xakameeyo lafa-dabka ma loo maleyneynin inay ku socoto jidkaas," ayuu yiri. Maya, fooriyadan, magaceeda, waxay ahayd dhab ahaan waxa loola jeeday inay awoodaan inay sameeyaan. Waxay ahayd Tareenka Xawaaraha Sare ee aan aheyn in ay halkaas joogaan. Tababar ayuu xitaa ku soo galay qalad.
Shaqaalaha Kadir Ünal, Adem Yasar iyo Hulusi Böler halkii ay ka soo gali lahaayeen quraacda subixii, waxay horay u sii shaqayn lahaayeen. Kenan Günay, oo si xun ugu dhaawacmay tuulooyinka mana awoodi karo in si degdeg ah loo daryeelo.
Yaa ogtahay sida baqdinta iyo baqdintu ay u soo martay marka ay ogaadaan in ay ku jiraan wadada isku midka ah ee iftiinka hore u arkay? Waxay u badan ahaayeen xitaa aysan helin fursad ay ku fekeraan. Ka dibna wax walba waxaa lagu aasay mugdiga iyo qeylada weyn.
Taasi ma aysan dhicin. Rakaabayaasha Yusuf Yetim, Tahsin Ertas, Arif Kahan Ertik, Berahitdin Albayrak, Kubra Yilmaz iyo Ebru Erdem Ersan ayaa qorsheynaya waxa la qabanayo fiidkii.
Mashruucu miyay dhammaatay?
'' Dib-u-dhiska Sincan-Ankara-Kayaş Line '' oo magaciisa rasmiga ah, iskaashiga Gülermak-Kolin ayaa la qaaday kadib dadaal dheer. Mashruucu wuxuu weli ku jiraa qaybta 'Mashruuca socda' ee bogga Kolin. Marka lagu daro shaqooyinka korontada, isgaadhsiinta iyo isgaadhsiinta ayaa sidoo kale lagu daraa hindisada, marka laga reebo shaqada buuxda, qodista waddada, qaabeynta saldhiga, xariiqda xariiqa, marinka sare iyo kuwa hooseeya. Laakiin ka hor dhammaadka mashruuca 'Habka Ogolaansho Ku-meel-gaadhka ah' ayaa la adeegsadey, hawlgalladuna waxay bilaabantay markii shaqada la socday.
Nidaamka kaliya ee nidaamka signalka oo ka hortagaya tareenada ka imanaya madaxa oo ku yaal khadka isku midka ah waa in xariiqdan 12 tareenada maalintii aan la dhammayn. Tani ma aysan ka baxsan dareenka qaar. Calaamadintu waa arinka ugu murugada badan labadii bilood ee ugu dambeeyay ee wargeyska 'Ankara BaskentRay Trams System'. Isticmaalayaasha 8 ee bisha Oktoobar gisi Waan ku faraxsanaan lahaa inaan nala wadaagno markii ay calaamadintu dhammaato. Tani waa khadad aad u fara badan. Hadda way fiican tahay. Intaa waxaa dheer, dardargelinta duulimaadka YHT ayaa la siin doonaa, Sidoo kale wuxuu sheegay.
21 kale ayaa ah Oktoobar ına Waxaan ku noolahay meel u dhow tareenka tareenka mana arko wax shaqo ah oo ku saabsan calaamadeynta. Miyuu ahaa qandaraas-siinta qalabka si gooni gooni ah, ma lagu darey shaqada hadda? Waxaan la yaabanahay haddii ay run ahaantii u shaqeyneyso, Ayuu qoray.
Isticmaaliye kale ayaa u jawaabay su'aashaas CIMER maalinta xigta. CIMER's 14 ayaa bishii Nofembar sheegay bishii November in Y aan waydiiyay calaamadda, tani waa jawaabta, ayuu yidhi. Tallaabooyinka amniga iyo nabadgelyada ayaa la qaadaa loona shaqeeyaa sida TMI, iyada oo la xakameynayo xakamaynta
Waa maxay TMI?
Ballaarinta 'Gaadiidka ka socda Xarunta ilaa Telefoonka'. Tani nidaamka ardayda dugsiga sare ee xirfadda leh wax barashada shakhsiga la siiyo by Wasaaradda Waxbarashada "u furan yahay dhacdo marka la eego baadi aadanaha, si xun u saameyn gaadiidka tareenka" waxaa soo bandhigay qoraallada. Waxaa jira habab badan oo isgaadhsiineed oo loogu talagalay fursado badan. Sidaas, saldhigga dhexe ee telefoon, iyadoo ay jirto in tilmaamaha tareen Ankara la siiyaa wararka raadiyaha.
Tusaale ahaan, xakamaysada gaadiidka, iyo sidoo kale in Ankara, saac u badan tahay mid ka mid ah iyo badh in ay ku dhameysan wareejin habeenkaas bilaabantaa 12 ah, Xadiidka Xawaaraha Sare oo kiiska la xiriira Lokomotif'l Guide ayaa sheegay in Qofta ah. Koobnaan Qofta tareen iyo sarkaal u badan tahay dhaafay wakhtigii 12 14 in gelinba 10-ka saac. Kalluumeeyuhu wuxuu u wareejinayaa amarka sarkaalka. Kala tababbar dharka sargarta. Tareenka ayaa sii wadaan in ay ku hanuunin jidka xagga iyo in sida gacanta tareenka taagan.
Calaamadintu maahan mid sidaas oo kale ah. Kadibna waxaa jiri lahaa nalal sheegayo makaaniku in uusan noqonin waddadaas. Aynu sheegno in makaaniku uu seexdo, ma uusan arkin nalka cas. Markaa tareenka tareenka ayaa qaadi doona tallaabo, tareenka ayaa iska joojin doona.
Ha baqin, wiil, riix!
Sababtee ayey tirada kor u kicisay, oo ay ku jiraan Tareenada Xawaaraha Sare, ka hor intaan calaamadinta la dhameeyo, taas oo ah tan ugu muhiimsan waajibaadka hindisada?
Madaxweynaha 12 2018 April ooriyay inta uusan u dhaqaaqin in darawaliinta tareenka BAŞKENTRAY kursiga, ma ay ogayn in dhammaadka tareenka ka soo cusboonaaday shaqada digayaan? Miyay dhammaan 'xiiseyn' ogaanin tan? Maxaa loo dulqaatay?
Tani maaha in lagu sharaxo jaahilnimada. Waxay u egtahay in ay ka baxayso mashruuc caan ah. Waa inay jawaab u noqotaa dhimashada dadka. Laakiin kharashka qaladkan, hababka muddada dheer iyo hababka khatarta ah waxaa bixinaya shaqaalaha.
shilka tareenka ee Pamukova degdegsiimada in dadka July 22 2004 ku dhintay xnumx't in 41 8 mid ka mid ah laba wadayaasha, kale waxaa laga helay haleysan yahay in 1 8. Labadooduba waxay galeen xabsi. 3 8 ayaa mas'uul ka ahaa shilka.
kala iibsiga ee dareewal ah, tareen dhima circuit dejinta ammaanka 'dardar', baarista hilib in dareewal in ay dib u dhac, "Ha baqina ina ma aha, Basta!" Waxa uu ku hawlan daabacaadda, "Baabuurtaas aan u qalmin heerka this," ayuu yiri Seminaarada beerta TCDD jir ceyrisay madaxa Suleyman Maareeyaha Guud ee Waaxda Karaman, maanta oo ah xildhibaanada AKP ee Erzincan. On ay bogga u gaarka ah, magaca "door mashaariicda tareenka ugu weyn ee in ka badan 2003 mashruuca Xadiidka Xawaaraha gaar ahaan High, wada jir ah ula ansaxinta ee Sector Tareenka siyaasadda gobolka ka our dowladda 100 sano oo waxaa lagu guul leh magacaabo taas oo si weyn gacan ka xaqiijinta," ayuu qoray wargayska. Looma ogola Pamukova. Shilka ayaa keenay dhimashada sideed qof oo ku nool Tavishan. 8'in 4 ee cilladda waxaa lagu rakibay maamulkeeda. Markaasuu iska casilay kara ama xilka ka mid ah makaanik oo aan si fiican u ahaa marka laga reebo. The markaas Ra'iisul-wasaare Erdogan ee "istiqaalada Wasiirka Gaadiidka doonaa" karta in aad xusuusatid in weriyaha weydiinaya su'aasha sida loo cadaydo. Sida Pamukova Ciqaabtiisu Ankara mar kale 'ka dib in la jaro.
United Gaadiidka Workers 'Union (BTS) Guddoomiyaha Hasan Bektas dareewal Sida laga soo xigtay xogta la joogo la wadaago 12 534 line kun oo kiiloomitir ee Turkey oo keliya kun oo kiiloomitir 5 534 signalization. Inta kale waxaa maamula nidaamka TMI.
Guddoomiyaha BTS Ismail Özdemir ayaa sidoo kale ahaa injineerka sannadaha. Wuxuu isticmaalay lugtii hore ee laba cisho ka hor. Wuxuu garowsan yahay farsamoyaqaanada u keenay shilka, oo wuxuu ku dhex tuuray gudaha: Way fududahay in qaladaad lagu sameeyo. Waxaan dooneynaa inaan si degdeg ah u dhammaystirno nidaamka calaamadaha iyo nidaamka otomaatiga iyo horumarinta degdegga ah ee xaaladaha Tilmaamaha
Markaad akhriso maqaalkan tareenada kale waxay ku socdaan wadooyinkaas.
Xigasho: Banu GÜVEN - www.diken.com.t waa
Burburkii Waddooyinka ee Musiibada Musiibada ee Tekirdaag
Dulucda laga barto Musiibooyinka Musiibada ee Ankara "Dhallaanku wuu ka gudubaa Marsandiz!"
Kenan Günay, Dhaawaca Tareenka Ayaa ku Dhaawacmay Ankara, Lagu Ejiyay!
Sheekooyinka Dadka Ka Noolaaday Naftooda Dembiyada YHT ee Ankara
Dhibaato ku sameyso Ankara
Eeg Tusaaleyaal buuxa Kadir
Sincan - Ankara - Kayase Line